Warshad Daawaha Elektromarka - Soosaarayaasha Daawaha Daawada Korontada, Alaab-qeybiyeyaasha
Daawada Ni-Cr elektromerka waxay leedahay awood heerkulkeedu sareeyo. Waxay leedahay adkaansho wanaagsan oo si fudud uma beddesho. Qaab dhismeedkeeda hadhuudhku si fudud looma beddelo. Balaastiigga ayaa ka fiican alloysyada Fe-Cr-Al. No burburin ka dib qaboojinta heerkulka sare, nolosha adeegga dheer, ay fududahay in la farsameeyo iyo alxanka, laakiin heerkulka adeegga waa ka hooseeyaa Fe-Cr-Al daawaha.
Xarigga baakadka-xirxiraya waa nooc ka mid ah alaabteenna cusub. Qaadashada tiknoolajiyada casriga ah, siliggu wuxuu leeyahay culeys sare iyo qumman. Adoo isticmaalaya xirmooyinka baaldiga, waxaad ku badbaadin kartaa waqti inaad ku beddesho xirmooyinka ka soo horjeedka bacaha yaryar ee caagga ah halkaas oo ay tahay inaad si joogto ah u joojiso wax soo saarka.
Heerkulka High silig koronto, Silig koronto oo adkaysi u leh, Silig kululaynta korontada, Alaab-qeybiye koronto kululeeyaha, Fiilooyinka kululeeyaha korontada, Silig iska caabinta korontada,